धेरै टूथपेस्टले दाँत बिगार्छ, होश गर्नुस् - Safalnews- News Portal from Nepal in Nepali.
सफल न्युज द्वारा २०७७ चैत्र २४ गते मंगलवार १८:०१ मा प्रकाशित
बिहान बेलुका दाँत माझ्न सिकाइन्छ तर कति टूथपेस्ट लिने भन्ने विषयका बारेमा बाल्यकालमा कसैले केही भनेको थियो त ?
हरेक दिन आफ्नो मुख र दाँतको अवस्था आफैं जाँच्ने । दन्तचिकित्सककहाँ नियमित जाने । सरसफाइ र पौष्टिकतामा ध्यान दिने ।